Obodo na-ekwuwapụta mgbanwe na nkesa ọgwụ mgbochi - princetoncovid.org
Obodo na-ekwuwapụta mgbanwe na nkesa ọgwụ
Ngalaba Ahụike Mercer County kwupụtara na mbido izu a na ọ gbanweela nkesa ọgwụ mgbochi dabere na NJ Department of Health. Biko pịa ebe a maka Mmelite Ọrịa February 10.
** Biko rụba ama: Ọ bụrụ na ị nwere ọgwụ nke abụọ emere ya na Ngalaba Ahụike Princeton, ị ga-enweta ọgwụ ahụ na ụbọchị nhazi. **
Debanye aha maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa - Soro ndị nchere site na iji Usoro nhazi oge mgbochi New Jersey. Emecha fọm ndebanye aha gị ga-ewe ihe dịka nkeji iri na ise. A ga-ajụ gị ajụjụ ụfọdụ iji chọpụta mgbe ị tozuru ịnata ọgwụ mgbochi. Ọ bụrụ na ịnwe nsogbu na ọrụaka na ndebanye aha, kpọọ COVID usoro ihe omume na-enyere gị aka (15) 855-568 ma ọ bụ mezue nke a. Formdị Enyemaka.
Ndepụta Chere Dị - Ọ bụrụ n’ị nọ na ndepụta nchere Princeton, Mercer County Division of Health na / ma ọ bụ Ngalaba Ahụike Princeton ga-akpọtụrụ gị mgbe ahọpụtara gị maka oge atọrọ. Ọ bụrụ n ’ịnọ na ndị nchere wee nata ọgwụ mgbochi gị ebe ọzọ, biko email ndị ọchịchị Health Department na-ewepụ si waitlist. Biko adịghị kpọtụrụ ngalaba banyere nhọpụta ma ọ bụ ọnọdụ echere.